Kismaayo: Gaari ay wateen ciidamada Maamulka Juba oo qarax lala beegsaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo: Gaari ay wateen ciidamada Maamulka Juba oo qarax lala beegsaday
A warsame 1 March 2014 4 April 2019
Kismaayo – Mareeg.com: Qarax ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku dhaawacantay 3-askari oo ka tirsan ciidama maamulka KMG ah ee Jubba ee ka arrimaya magaaladaas.
Qaraxa ayaa ahaa miino dhulka la geliyey, waxaana lala beegsaday gaari ciidamadu wateen oo marayey agagaarka isbitaalka guud ee Kismaayo.
Dhaawacyada ayaa la geeyay isbitaalka guud ee Kismaayo si loo daweeyo, waxaana goobta sida caadiga ah tegay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka KMG ah ee Jubba kuwaasoo sameeyey baaritaan walow aan cidina la xirin.
Magaalada Kismaayo ayaan aheyn magaala xasiloon, waxaana marka laga soot ago Alshabaab, weeraro iska soo horjeeda ka fuliyo maleeshiyaad hubeysan oo kazoo kala jeeda beelo kala duwan.
Booliska Soomaaliya oo gaadiid ciidan ka helay Midowga Afrika
Xisbul Islaamkii burburay oo dhaleeceeyey Hogaamiyaha Alshabaab